D/Hoose ee Hargeysa oo digniin adag ugu jeedisay Shirkada khashin ururinta ee DHIS | Somaliland.Org
November 29, 2011	< Hargeysa (Somaliland.Org)- Dawlada Hoose ee Hargeysa ayaa dhaliishay isla markaana u digtay shirkada Dhis ay qandaraaska ku siiyeen hawsha fayo-dhawrka sadex degmo oo ka mid ah Caasimada.
Waxa kale oo ay dawladda Hoose ee Hargeysa aysoo bandhigtay qorshe hawleed ku waajahan qaabka ay u waajihi doonaan wax ka qabashada nadaafada, ilaalinta bilicda Caasimada iyo nidaaminta suuqyada caasimada, sidaasna waxa daboolka ka qaaday Agaasimaha Waaxda Caafimaadka iyo arrimaha bulshadda D/Hoose Mr. Khadar Yuusuf Cali.
Agaasimaha oo faahfaahin ka bixinayay qeybaha waaxdan iyo waajibaadkooda wuxuu yidhi “Waaxdani waa waax aad u mihiim ah waxaanay ka kooban tahay afar waaxood oo kala ah qeybta caafimaadka guud , qeybta Nadaafadda, ilaalinta deegaanka iyo qeybta bilicda, imika intii aan xilkan la wareegay dhawaan waxaan isku daynay inaanu qeyb walba ka shaqaysiino oo wax ka dhaqaajino. Waxaanu xooga saarnay qeybta caafimaadka guud oo aanu durba isbedel weyn aanu ka muujinay kaasi oo ah qeybta ugu xasaasisan oo had iyo jeer bulshadda taabata waxaana ka mid ah badeecadaha oo dhacay si loo fuliyo sharciga caafimaadka guud oo ah in wax laga qabto saxadda Cuntada hudheelada, Doobiileyaasha, xamaamada, Raysleyaasha iyo Hudheelada hurdada waxaanu qaadnay tallaabooyin baadhitaan ah oo aanu goobahaasi ku baadhayno. Waxa kale oo aanu qaadnay inaanu tallaabo ka qaadno Huteeladu biyaha wasakhda ah ee ay daadinayaan aanu ku ganaaxno. Waxaana maalmihii u dambeeyay dhacday in Huteeladu ka caageen inay biyo wasakhaysan ay ku daadiyaan wadooyinka.”
Agaasimuhu wuxuu sheegay inay qaadi doonaan hawl galo baadhis ah oo ay ku baadhayaan bad-qabka caafimaadka cuntooyinka, wuxuu u soo jeediyay Meheradaha cuntada inay ilaaliyaan saxada cuntooyinka.
“Badeecadaha dhacay waanu soo qabqabanaa waxaana aanu ka qaadnaa cidii aanu ku qabano ganaax adag oo lacageed oo u dhaxeeya 300 oo kun illaa hal malyan oo shilin.ganaaxaas adagi wuxuu sababayaa in laga waantoobo in badeecad dhacday la iibiyo, marka la xanuujiyo qofku xataa wuxuu iska eegayaa marka uu badeecada uu soo iibsanayo inuu iska baadho oo taariikhdeeda,”ayuu yidhi Mr. KHadar Yuusuf Cali.
Agaasimaha oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Waanu ognahay imika istoodho ay waaweyn oo ay leeyihiin Ganacsatada waaweyn oo aanu ku tuhunsanahay in badeecado dhacay lagu kaydiyay, waxaanu leenahay inta aanaan anagu idin qaban waa inaad idinku soo gudbisaan oo nidaamkii loo gubi jiray alaabta dhacday ee suuqyada taalla.waxaanu ganacsatada waaweyn ee aanu arrintaasi ku qabano ku ganaaxi doonaa hal malyan illaa sadex milyan, halka dukaamada yar yarna aanu ku ganaaxi doono 150 kun oo shilin ilaa hal milyan oo shilin inta u dhaxaysa.”
Agaasimaha arrimaha bulshaddu waxa uu dadka lo’da ku soo daaya suuqyada uu uga digay inay muddo todoba maalmood gudahood ah ay xoolahooda kaga saaraan magaalada. Waxa kale oo uu biyooleyaasha iyo gaadhi ximaarada u soo jeediyay inay dabo-gelis u sameeyaan dameeraha.
Khadar Yuusuf Cali oo ka hadlayay dhinaca khashinka wuxuu si adag u dhaliilay mid ka mid ah labada shirkadood ee u xilsaaran wax ka qabashada khashinka waxaanu yidhi “Dawlada Hoose waxay khashinka caasimada ku wareejisay labada shirkadood ee Dhis iyo Sabo-wanaag, shirkada Dhis waxay ka masuul tahay sadex degmo oo kala ah Gacan libaax, Ibraahim Koodbuur iyo 26-ka June, halka Sabo-wanaag-na ay masuul ka tahay degmooyinka Axmed Dhagax, Maxamuud Haybe iyo suuqa dhexdiisa. Runtii waa in shirkadahaasi waajibkooda gutaan, waxaad moodaa in shirkada Dhis ay ka gaabisay waajibkeedii kolay digniina waa la siiyay, anaguna waax ahaan kormeer iyo dabo-gal ayaanu ku haynaa. Haddii sida ay maanta ku sugan tahay wax ka bedeli waydana waxa laga qaadayaa tallaabo adag in khashinku sadexdaasi degmo yaalaa uu sidaasi sii ahaado dawlada Hoose ma soo eegan doonto, wax ka qabashada arrintaasina way ka go’an tahay Maayarka Caasimada.”
Agaasimuhu waxa kale oo uu balan qaaday inuu soo celin doono bilicdii caasimada iyo raadadka taariikhiga ahba.
Khadar Yuusuf waxa uu intaasi ku daray inay kala nidaamin doonaan suuqyada iyo faras magaalaha caasimadda.
Previous PostSawirada Madaxweynaha Somaliland Oo ku soo guryo noqday dalkaNext PostMasuuliyiinta diinta iyo awqaafta oo beeniyay in khilaaf ka jiro wasaaradooda	Blog